Mogadishu Journal » Guddoomiyaha fulinta Ahlu Sunna Waljameeca oo sheegay in uu soo dhaweynayo haddii xil ka qaadis lagu sameeyo
Mjournal : – Gudoomiyaha guddiga fulinta maamulka Ahlu Sunna Waljameeca ee gobolka Galguduud Cabdi Cali Fiidoow oo warbaahinta la hadllay ayaa sheegay in uusan waxba ka qabin xil ka qaadis la damacsan yahay lagu sameeyo.
Magaalada Dhuusa-mareeb oo ah xarunta gobolka Galguduud waxaa ka soconaya olale balaaran oo loogu jiro sidii xil ka qaadis loogu sameyn lahaa guddoomiyaha guddiga fulinta maamulka Ahlu Sunna Waljameeca oo loo soo jeediyo eedeymo la xiriira in uu si aan wanaagsaneyn u isticmaalay xilka uu hayo.
Gollaha tallada maamulka Ahlu Sunna Waljameeca ayaa la filayaa in ay saacadaha soo socda kulan ku yeeshaan magaalada Dhuusa-mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud si ay xilka qaadis ugu sameeyaan gudoomiyaha golaha fulinta maamulkaas oo ay ku eedeynayaan wax qabad la’aan iyo in uu hareer maray ballan qaadkiisii ahaa meel-marinta hawlihii loo igmaday.
Sidoo kale, gollaha ayaa ku eedeeyay guddoomiyaha guddiga fulinta Cabdi Cali Fiidoow in uu lunsaday dhaqaallihii maamulka Ahlu Sunna Waljameeca, islamarkaana baal-maray tallada iyo wada tashiga maamulka dhaxdiisa ah.
Cabdi Cali Fiidoow oo warbaahinta kula hadllayay degmada Guri-ceel ee gobolka Galguduud ayaa sheegay in hadda mudo lix bilood ah uu hayo xilka gollaha fulinta, islamarkaana waqtiga la doortay uga dhiman tahay sanad iyo bar taasoo macnaheedu noqonayo in labo sano la doortay, waxaana uu sheegay in haddii leysku raaco in uu xilka wareejiyo isku sii dhajin doonin.
”Haddii leysku raaco in aan meesha baneeyo ama xilka leyga qaado waan wareejinayaa, waxaana igu filan waxqabadii aan muujiyay mudadii koobneyd oo aan xilka hayay, gaar ahaan in aan hagaajiyay xiriirka maamulka iyo dowladda federaalka Soomaaliya, kana shaqeeyay in guddoomiye cusub u soo magacaawdo dowladda gobolka Galguduud,” ayuu yiri Cabdi Cali Fiidoow.
Waxaa uu sheegay in uu isagu aaminsan yahay in uu si hufan u gutay waajibaadkii shaqo ee loo idmaday, mar haddii uu xoogga Ahlu Sunna Waljameeca si toos ah ugu wareejiyay dowladda federaalka Soomaaliya wixii hadda ka danbeeyana hili doonaan xuquuqdii ka maqneyd, sidaa daraadeed waxaa uu sheegay in uusan wax ka qabin olalaha socda ee la doonayo in xilka looga qaado.
Tan iyo wixii ka danbeeyay markii ay dowladda federaalka Soomaaliya u soo magacaawday gobolka Galguduud guddoomiye cusub oo badallaya guddoomiyihii hore waxaa sii xoogeysanayay khilaafka u dhaxeeya xubnaha maamulka Ahlu Sunna Waljameeca.